.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဒုံးပျံ Album - လွှမ်းပိုင် ၊ Bobby Soxer
ဒုံးပျံ Album - လွှမ်းပိုင် ၊ Bobby Soxer
ဒီနေ့တော့ Shwe FM 4th Achievement Award 2013 မှာ ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံး Hip Hop Album ဆု ရရှိထားတဲ့
လွှမ်းပိုင် နဲ့ Bobby Soxer တို့ရဲ့ ဒုံးပျံ Album လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းတွေ အားလုံးကလည်း အရမ်းကို
ကောင်းနေတော့ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အောက်မှာ နားထောင်လို့ရော ဒေါင်းယူလို့
ရပါတယ်နော်။ သီချင်းတွေကို ဒေါင်းယူချင်တယ်ဆိုရင် သီချင်းလင့်ကို Right Click >> Save Link As.. ကို နှိပ်ရုံပါပဲ။
1 ဆိုရင်းကမယ် လွှမ်းပိုင် ၊ Bobby Soxer Click Here !! 2.00 MB
2 ယုံကြည်လိုက် Bobby Soxer Feat. နီနီခင်ဇော် Click Here !! 2.50 MB
3 ဘိုကေ လွှမ်းပိုင် Click Here !! 1.50 MB
4 အာရုံ Bobby Soxer Feat. အိမ့်ချစ် Click Here !! 1.90 MB
5 မဝေးဘူး လွှမ်းပိုင် Click Here !! 2.00 MB
6 စွာတေးလန် Bobby Soxer Click Here !! 1.20 MB
7 စနေနေ့ လွှမ်းပိုင် Click Here !! 1.60 MB
8 မြန်မြန်ချစ်ရင်ချစ်တယ်ပြော Bobby Soxer Feat. စိုးဖြိုး Click Here !! 1.70 MB
9 စိတ်ပျက်နေတဲ့လူ လွှမ်းပိုင် Click Here !! 2.30 MB
10 ဒုံးပျံ လွှမ်းပိုင် Click Here !! 1.60 MB
11 စုံထောက် ( 007 ) Bobby Soxer Click Here !! 1.70 MB
12 တုန် လွှမ်းပိုင် Click Here !! 1.50 MB
13 တိတ်တခိုး Bobby Soxer Feat. ရဲလေး Click Here !! 1.60 MB
14 အယ်လ်စီဒီ ( LCD ) လွှမ်းပိုင် Click Here !! 2.30 MB
15 အရိပ်ကလေးလို လွှမ်းပိုင် Click Here !! 2.20 MB
16 ကောင်မလေး လွှမ်းပိုင် Click Here !! 2.10 MB
17 ဒီလိုမျိုးချစ်သူတွေ လွှမ်းပိုင် ၊ Bobby Soxer Click Here !! 2.00 MB
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ Mp3 Download Link တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ လုံးဝ တင်ခွင့်မပြုပါ။
ဒီ သီချင်းတွေအားလုံးကို ကျွန်တော် Thurainlin ကိုယ်တိုင် Upload တင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါ။